Satellite na mbadamba - dị ka onyinye - akwụkwọ akụkọ "Potato System"
Satellite na mbadamba dị ka onyinye
Onye rụpụtara Russia kemịkalụ nchekwa osisi - Firm "August" JSC - otu afọ gara aga wepụtara ngwa nkwado teknụzụ ọhụrụ maka ndị mmekọ ya dabere na mmemme SkyScout. Mgbe ị na -arụ ọrụ na nkwadebe ụlọ ọrụ ahụ, ndị na -emepụta ihe ubi na -enweta ohere nke ịnweta ohere dijitalụ nke na -enye ha ohere ịme nleba anya satịlaịtị nke ubi, soro usoro mmepe mkpụrụ osisi, chọpụta mpaghara nsogbu n'oge, nweta amụma ihu igwe maka mpaghara ọ bụla, gbakọọ ezigbo usoro usoro agrotechnical, nyochaa arụpụtaghị ala dabere na data ruo ọtụtụ afọ, yana ịnakọta na ichikota ozi niile sitere n'ọhịa n'ime otu sistemụ. Dabere na ozi a, ndị njikwa-teknụzụ nke "Ọgọstụ" na-etolite ndụmọdụ n'oge kwesịrị ekwesị na nke kachasị maka nchekwa ihe ubi maka ugbo ọ bụla. Ụlọ ọrụ ugbo 127 ndị mmekọ nke "Ọgọstụ" esonyelarị n'ọrụ a, ngụkọta mpaghara digitized taa bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde hekta 1,14.
Sistemụ SkyScout bụ mmepe nke ụlọ ọrụ Russia IntTerra n'ọhịa nke ịkọ ugbo: mgbe ejikọtara ya, ndị ọrụ ugbo na -enweta ohere na mpaghara digitized. Usoro a na -enyocha steeti ihe ọkụkụ na mpaghara ndị a site na iji data satịlaịtị na ndepụta indices gbakọọ na ndabere ha. Yabụ, otu ihe a na -ahụkarị bụ ndepụta ahịhịa ahịhịa nke NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), nke na -egosi njupụta nke oke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'ọhịa. A na -agbakọ ya site na nhazi nhazi onyo onyonyo nke na -egosi etu osisi siri ike na -egosipụta ma na -amịkọrọ ọkụ. Ike a dabere na ọrụ nke photosynthesis ha, nke mere na site na ngwaọrụ NDVI ọ ga -ekwe omume ịghọta ka ihe ọkụkụ si eto nke ọma.
Ngosipụta nke heterogeneity na deviation NDVI, n'aka nke ya, na -egosi etu steeti osisi si dị iche n'otu ubi. Ọ bụ nnukwu ihe ndọpụ uche nke NDVI na-egosi na ihe ọjọọ nwere ike ime n'ọhịa: mmebi nke ọrịa ma ọ bụ ụmụ ahụhụ, ịgha mkpụrụ na-adịghị mma, ọgwụgwọ adịghị mma na ntụzịaka teknụzụ ndị ọzọ, mebiri osisi ndị metụtara ihu igwe na ihe ala, wdg. . Nke a na -enyere GPS aka ịnyagharịa ụzọ kacha mma na gburugburu ubi, gaa na mpaghara na -ajụ ajụjụ, ma chọpụta nsogbu ozugbo. Nke a dị mkpa maka nnukwu ugbo ihe ọkụkụ nwere mpaghara iri puku kwuru puku hectare.
Ndị ọrụ IntTerra na ndị teknụzụ Augusta na -enyere ndị ọrụ ugbo aka ka ha mata mmemme a, ha na ha na -aga n'ubi iji dozie ọnọdụ ndị siri ike ma dozie nsogbu n'oge. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ndị na -ahụ maka teknụzụ nke Ọgọstụ na -eme nyocha n'onwe ha, na -akwadebe foto, akụkọ na ndụmọdụ dị mkpa, wee mee ka ndị ọrụ ugbo na ndị isi ụlọ ọrụ ugbo mara SkyScout. N'ihi ọrụ izugbe na nchịkọta data, etinyere “akụkọ elektrọnik” nke ubi, nke na -enye ohere ịme mkpebi nchịkwa ziri ezi n'ọdịnihu.
A kwadebere sistemụ ahụ ọtụtụ ihe nrụtụ aka: ozi gbasara ihe ọkụkụ n'onwe ha, ụdị, ọnụego mkpụrụ, data na ahịhịa, pests na ọrịa, ndepụta nke fatịlaịza na ọgwụ na -egbu egbu ka enyere maka ojiji. Enweela ohere ịnweta ndụmọdụ onwe onye site na iji ikpo okwu. Dị ka Gismeteo si kwuo, sistemụ ahụ na -akwadebe amụma ihu igwe kwa awa maka ugbo ruo ụbọchị ise, enwere ike nweta foto nkeonwe maka kilomita ise ọ bụla. Dabere na nsonaazụ amụma a, mmemme ahụ n'onwe ya na -agbakọ usoro nhazi kacha mma. Na 2021, Ọgọstụ na ndị mmekọ ụlọ ọrụ ahụ nwetara ohere ọzọ dị mkpa a na -akpọ Mpaghara ọmụmụ: ọ na -egosi onyonyo nke nrụpụta ubi dabere na data satịlaịtị achịkọtara kemgbe 2013. Ozi gbasara ebe enwere ebe na-emepụta ihe na nke anaghị emepụta ihe na-enye gị ohere ịmepụta maapụ ngwa fatịlaịza dị iche na mmemme a.
Ka ọ dị ugbu a, ugbo 127 abanyelarị na sistemụ site n'enyemaka nke August, na mkpokọta mpaghara nke digitized bụ nde hectare 1,14. Ọzọkwa, a na -eji ike nke mmemme a nyochaa saịtị nke ndị sayensị na ndị ọrụ ugbo nyochala ụfọdụ nnwale (ihe karịrị puku hectare 2 ugbu a).
Yulia Babak, onye nhazi oru ngo na -ekwu, "Taa, a na -ahụta iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa ọ bụghị naanị site na ịdị irè nke ọgwụ ike na oge nnyefe ha. - Ịrụ ọrụ na ikpo okwu dijitalụ na -enyere anyị aka iru ọkwa ọhụrụ nke ọrụ a. N'ihi nkwado dị otú a, ndị ọrụ ugbo na -enweta ngwaọrụ ọhụrụ maka nleba anya, nyocha na ịkọ amụma, anyị nwekwara obi ike na a ga -eji ngwaahịa nchekwa osisi Augusta mee nke ọma, n'ụzọ dị irè na kpọmkwem ebe ọ dị mkpa. Anyị họọrọ ikpo okwu dijitalụ maka ọrụ n'akụkụ a, na -elekwasị anya n'ịgụ akwụkwọ nke ịbịaru nhazi na ịkọwa ihe onyonyo satịlaịtị, ugboro ole ha, yana na njikere ịgbaso ihe ndị anyị chọrọ maka imezi ngwa mmemme. Ihe mgbaru ọsọ anyị taa bụ ka mpaghara niile "ejikọrọ" na sistemụ wee chịkọta data na ọnụ ọgụgụ kacha arụ ọrụ, na ịdị mma nke mmekọrịta anyị na ndị ọrụ ugbo na-adịwanye mma mgbe niile, gụnyere ekele maka imekọ ihe ọnụ nke ọma. "
isi: Pịa ọrụ nke JSC Firm "August"
Tags: "Ọgọst"nyiwe dijitalụ
Nsogbu Agrarian nke Azerbaijan: owuwe ihe ubi bara ọgaranya na enweghị isi
Ministri nke Ugbo tụlere atụmatụ maka mmepe nke mgbagwoju anya nke Russia